Nahatsiaro Saina i Schumacher, Mahita Hanihany Atao Ny Twitter Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Deutsch, বাংলা, English
Karazana tontolo inona no hitan'ilay mpitondra “rallye” Michael Shumacher taorian'ny coma nahazo azy? Miresaka momba izany ny Rosiana. Sary natambatambatr'i Kevin Rothrock. .
Nanomboka ny 29 Desambra 2013 hatramin'ny 16 Jiona 2014, tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena (coma) ilay mpamily rallye efa misotro-ronono Michael Schumacher taorian'ny loza mahatsiravina nahazo azy tamin'ny sky (korisa). Rehefa nahatsiaro tena i Schumacher ary nandao ny hopitaly, nanararaotra ity tranga ity hamazivaziana ny fanatanjahan-tena sy ny politika ireo mpisera Twitter Rosiana.
Satria mbola ratsy ny fifandraisana eo amin'i Moskoa sy Kiev, mazava ho azy fa bilaogera maro no naniry mafy hamely an'i Okraina amin'ny “vazivazin'ny coma”. Kaonty fakan-tahaka maneso (parodie) ny Kremlin ofisialy, Vladislav Sourkov nilaza izao:
Tafala tamin'ny “tsy fahatsiarovan-tena (coma)” i Schumacher, fa niditra tamin'izany (coma) i Okraina. #gas
Kaonty Twitter hafa izay maka tahaka ny kaontin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao Rosia namazivazy ny fikirizan'ny Kremlin amin'ny mahery fihetsika (extremisma) ankavanana izay voalaza fa manjakazaka amin'ny politika Okrainiana.
Tafavoaka tamin'ny tsy fahatsiarovan-tena nahazo azy i Schumacher. Ny zava-dehibe ankehitriny dia ny tsy filazana aminy fa nandritra ny fotoana natoriany dia nofehezin'ny fasista izao tontolo izao, ankoatra an'i Rosia.
Raha nisioka ny Fahitalavitra iray tsy miankina fa natory i Schumacher nandritra ny herisetra sy ny korontana politika tao Okraina, mpisera Twitter iray namazivazy fa mety manafintohina loatra izany vaovao izany.
Aza mandeha hilaza amin'ny olona momba izany ianao. Handefa azy hiverina ao anatin'ny “coma” indray ianao an.
Mpisera Twitter hafa koa nampifandray am-pamazivaziana ny fahasitranan'i Schumacher tamin'ny zava-nitranga tao Atsinanan'i Okraina:
Araka ny vokatry ny fitsapa-kevi-bahoaka, nanambara ny fanapaha-kevitra hiala amin'ny “coma” ny Repoblikam-bahoakan'i Schumacher (RPS).
Ny sasany kosa nananihany fa nifoha i Schumacher mba hijery an'i Alemaina milalao amin'ny Fiadiana ho Tompon-daka Manerantany 2014.
Araka ny vaovao navoakan'ny Fast Slon, tafavoaka tamin'ny “coma” nahazo azy i Schumacher amin'ny fotoana idiran'ny ekipan'i Alemaina amin'ny Fiadiana ny Tompon-daka Manerantany 2014.
Raha mahita izao tontolo izao mampatahotra tokoa araka ny asehoan'ireo Rosiana sasany i Schumacher, mety hisafidy ny voalaza amin'ity sioka farany ity izy :
Tafavoaka tamin'ny “coma” nahazo azy i Schumacher, vakio ny vaovao farany izay milaza hoe “eny, adala avokoa ianareo”, ary nangatahana mba hiverina ao anaty “coma” indray.